खुसीयाली मनाउने बहानामा २८ घण्टा सेक्स – email khabar | Latest news of Nepal
खुसीयाली मनाउने बहानामा २८ घण्टा सेक्स
प्रकाशित : २०७१ असार १२ गते १६:५८
तपाइले आफूले चाहेको कुरा पुरा भयो वा तपाइले आफु सर्मथीत कुनै समुहले जित्यो भने खुशी कसरी मनाउनुहुन्छ ? तपाई नाच्नुहुन्छ ? बजाउनुहुन्छ ? टाढा टाढा गलफ्रेन्ड वा ब्वाइफ्रेन्डसँग घुम्न निस्कीनुहुन्छ ? वा अरु के के गर्न हुन्न्छ रु खुसी मनाउने सबैका आ आफुनै तरिका त हुन्छनै तर विश्वकपका बेला पोर्न स्टार र मोडलले भने कहिलेकाँही रमिता नै देखाउँछन् ।
पछिल्लो पटक चिलीकी एक पोर्न स्टारले पनि यस्तै रमीता देखाएकी छिन् । उनले कुनै खेल खेलेर वा अन्य त्यस्ता सामान्य कृयाकलाप गरेर भने होइन । उनले चालु विश्वकपमा आफू सर्मथीत टीमले जितेको खुशीयलीमा लगातार २८ घण्टा सेक्स गरेर खुशीयाली मनाएकी हुन् ।
चिलीकी पोर्नस्टार मार्लिन डालले चिलीले अस्ट्रेलियामाथि प्राप्त गरेको जितमा १२ घण्टा र स्पेनमाथिको जितमा १६ घण्टा सेक्स गरेर खुसी सेलिब्रेट गरेकी हुन् ।
मार्लिन डालले यदि चिलीको टिमले अस्ट्रेलियालाई पराजित गरेको खण्डमा समर्थकसँग आठ घण्टा लगातार सेक्स गर्ने घोषणा गरेकी थिइन्। चिलीले अस्ट्रेलियालाई ३–१ ले पराजित गरेको थियो । प्रतियोगितापछि मार्लिन डालले आफ्नो घोषणाअनुसार घरमा पार्टी आयोजना गरेकी थिइन् । मार्लिनले अबेरसम्म पार्टीमा भाग लिइन् र आफूलाई मन परेको पुरुषसँग सेक्स गरिन् । घोषणा त उनले ८ घण्टाको गरेकी थिइन् तर कार्यक्रम भने १२ घण्टासम्म चलेको थियो ।
चिलीकी पोर्टस्टार मार्लिन डालले चिलीले अस्ट्रेलियामाथिको जितपछि लगातार १२घण्टा र स्पेनमाथिको जितपछि उनले लगातार १६ घण्टा सेक्स गरिन् । मालिएन डालले यदि चिलीले अस्ट्रेलियामाथि जित हासिल गरे १६ घण्टा समर्थकसँग सेक्स गर्ने घोषणा गरेकी थिइन् ।
त्यसपछि मार्लिनले ट्वीटरमा फोटोसमेत पोष्ट गरिन् । तर, ट्वीटरले उनको एकाउन्ट ब्लक गरेको छ। चिलीले विश्व च्याम्पियन स्पेनलाई पराजित गरे आफ्नो सेक्स म्याराथन १६ घण्टा चल्ने घोषण गरेकी थिइन् । चिलीको जितपछि मार्लिनले त्यो घोषणा पनि पूरा गरिन् । उनले बेलाबेलमा यस्तै हर्कत देखाउँदै आउने गरेकी छिन् ।
ओली अध्यक्षको एक्लो उमेदबार हुन सचिव पौडेल
भन्सारप्रति व्यापारीको गुनासो